Xiaomi Redmi Note 7, nampivoitra endrika sy famoronana. | Androidsis
Toa tsy mijanona ny fiasan'ny modely vaovao i Xiaomi. Fantatsika fa ny mpanamboatra hanangana Xiaomi Mi A3 vaovao ary ankehitriny manana antsipiriany vaovao momba ny Xiaomi Redmi Note 7. Tamin'ny volana Desambra dia efa nilaza taminao ny a fanamarinana izay nanome anay hevitra momba ny fisian'ity terminal ity. Ary ankehitriny, ny famolavolana sy ny mampiavaka ny terminal dia tafaporitsaka, mazava fa misy izany.
Ho fanampin'izany, ny afisy dokam-barotra tafaporitsaka dia miseho amintsika fa datin'ny fampisehoana ny Xiaomi Redmi Note 7 amin'ny 10 Janoary, noho izany ao anatin'ny fotoana fohy dia ho fantatsika miaraka amin'ny efijery tsy mety vaky ny telefaona rehetra an'ity telefaona ity. Ho an'ity dia manana horonantsary maneho mazava izahay fa ny Efijery Xiaomi Redmi Note 7 mitazona izany rehetra izany.
Ity fitsapana faharetana ity dia mampiseho ny efijery tsy azo vaky ny Xiaomi Redmi Note 7
Araka ny hitanao amin'ity fitsapana fiaretana mahafinaritra ity, ny Efijery Xiaomi Redmi Note 7 mahazaka ny dian-tongotra, miaraka amin'ny fitsambikinana, olona marobe, izay milaza mazava fa tsy mila miahiahy momba azy isika raha sendra fianjerana na kapoka tsy nahy izy. Mikasika ireo toetra ara-teknika dia hitantsika amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana tafaporitsaka fa ity maodely ity dia ho lasa ampahan'ny afovoan'ny mpanamboatra Aziatika.
Amin'izany fomba izany Processeur Xiaomi Redmi Note 7 Izy io dia ahitana Qualcomm Snapdragon 660 SoC miaraka amin'ny RAM 6 GB, na dia mety hisy maodely misy RAM 4 GB aza. Izany dia tsy maintsy ampiana rafitra fakan-tsary avo roa heny ao aoriany, izay tsy ananantsika fampahalalana bebe kokoa, ary fakan-tsary eo anoloana izay miorina ao anaty notch miendrika rano mitete iray izay ananan'ilay fitaovana.
Ny fisarihana hafa lehibe an'ny terminal, ankoatry ny efijery tsy simba an'ny Xiaomi Redmi Note 7 dia ny bateria. Ary ny sary fampiroboroboana dia manome antsika hahatakatra fa hananana izany 4.800 Mah, mihoatra ny ampy hanohanana ny lanjan'ny fitaovana ary hanolotra fahaleovan-tena mandritra ny roa andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Sivanina ny endrika sy ny endrik'ilay Xiaomi Redmi Note 7 miaraka amin'ny efijery tsy azo vaky